Zuva: Chivabvu 14, 2020
Ceiling Fares Yekushandisa muPasipoti Yekutakura neRoad
Mukufambisa mumigwagwa vafambi, mutengo wedenga wedenga unofanirwa kushandiswa kusvika 19 Chikunguru nekuda kwekubuda kweCovid-31 kuchave pakati pezana ne100 mir. Mutengo wevatakuri vemigwagwa wekutakura mutengo wakatsanangurwa zvakare ne Ministry of Transport. [More ...]
Chisarudzo Chemutero Mukuwedzera Kuwedzera Mune Akachena Midziyo
Nadir Küpeli, Sachigaro weBhodi Revakuru veEskişehir OSB, anotsigira indasitiri yenyika kuti ichengetedze chigadzirwa chayo uye kukwikwidza munguva ino yemimwe mutero wemitero, unozoshandiswa pamatanho akasiyana anosvika makumi matatu muzana. [More ...]
Bursa Chamber of Commerce neindasitiri, (BTSO), iyo yaita akawanda mapurojekiti eChinyakare Bazaar uye Hanlar Region, iri munzvimbo yakakosha yekutenga nekutengesa muBursa, ine coronavirus. [More ...]
EGO, iyo yakawedzera hunyowani kune zvitsva zvakagadzirwa kuitira kuti vagare pamba uye vape kugara kwavo voga, panguva yedenda re coronavirus (Covid-19), yakaunza Ankarakart application online. Ankara Metropolitan Municipality EGO General Directorate [More ...]
Eskişehir Metropolitan Municipality, iyo akaita mari zvikuru mumaguta zvokufambisa, anosvika 75th Yıl Tourist nomukombiyuta City Hospital uye Kumlubel nomukombiyuta Opera, mushure 75th Yıl Tourist uye Şeker Mahallesi. [More ...]
Yakamiswa Invoice Chikumbiro Yakatangwa muAntalya
Analya Metropolitan Municipality Meya Muhittin Böcek akazivisa kuti vatanga chirongwa cheSuspension Invoice vanhu veAntalya vane matambudziko ehupfumi. Vachitaura kuti iyo nzira yekubhadhara yavhurwa kubva nhasi nhasi muSusupended Invoice application, iyo inoshanda kune ASAT mainvoice. [More ...]
Veruzhinji Kutakura Motokari dzeMahara kuti dzive Huru dzehutachiona ne Ultraviolet Ray
Meya weKayseri Metropolitan Municipality Memduh Büyükkılıç, ASPİLSAN Bhodhi nhengo uye Erciyes Yunivhesiti Faculty yeInjiniya Assoc. Dr. Akaita musangano nekubatanidzwa kwaAmetmet Turan Özdemir. Nemusangano wevhidhiyo [More ...]
Inoda kusvika zviuru zvishanu zvemukati mavoice akamiswa mumazuva gumi
Yakatangwa ne İBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu kutsigira vanhu vane mari yakarasika kana kurasika panguva yehurombo, iyo "Invoice iri paFluid" application inounza philanthropists uye philanthropists kuti vaone ruoko runopa ruoko. application [More ...]
Nhare Maskematic Shanduro Yakatangwa mu İzmir
Izmir Metropolitan Municipality yakaparura mafoni masematic application munzvimbo dzisina metro mushure memascemics ayo akaisa pazviteshi zvemetro kuti igone kuwana pachena kwevagari kune maski ekurapa. Nhare masematics inogona kuiswa chero kupi. Ne coronavirus kubuda [More ...]
Kukundikana kweropa mune Imwe-yechitatu yeavo Vanorapwa neCoronavirus Kurapa
Maererano nekumwe kuongorora, inopfuura chikamu chimwe muzvitatu chevarwere vakapihwa hutachiona hweCorona muNew York, vakatambura nekushaya kwemeno. Kwakataurwa kuti zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvevanhu ava vakasungwa dialysis. Tsvagiridzo iri mubvunzo, Nyowani [More ...]
European Commission Inozivisa Corona Nguva Yekufambisa Mitemo
The European Commission akazivisa nhevedzano mitemo kuti vakachengeteka kufamba mushure Corona utachiona zvigadziriswe miitiro kupinda kushanda munyika dzakawanda. Aviation kuti inomira nokuda chinangwa nemitemo ushanyi uye dambudziko [More ...]
Turkey Chambers uye Stock Exchanges Union (TOBB), inoitiswa nekutora chikamu muVocational Training Online Musangano Eskişehir Chamber of Industry, kuisa basa kunoenderera "Eskişehir Chamber of Industry - Vocational Training Center" yakapa ruzivo nezve. [More ...]
Phase 1000 kunyorera e-Government 3 TL chirwere chetsigiro chiri kuitirwa. 1 yekutanga uye yechipiri chikamu chekubhadhara kwemari yekubatsira mari yakaitwa kune vanoshaya. Ruzivo rwekuti unganyorere sei chikamu che2 TL yemagariro kubatsira zvikumbiro [More ...]
Asım Taş, uyo ainyura mumunda wake panguva yekushanda kweYHT, akataura kuti zvishandiso zvekurima zvakavigwa muhari zvakafukidzwa nekambani yemuchengeti. Sezvo zvichayeukwa; Asım, aigara muKurtköy weBilecik Center mumavhiki apfuura [More ...]
Ministry of Viwanda neTekinoroji yakarongedza maviri mafoni matsva ayo anozogadzira synergies muindasitiri kuburikidza neyakafanira institution, TUBITAK. Gurukota rezvemaindasitiri nehunyanzvi, Mustafa Varank vazivisa kudanwa kwakapetwa kaviri kune vemaindasitiri. "Order R&D" uye [More ...]
Mamirioni mazana matatu Turkish Liras Anosimbiswa
Zehra Zümrüt Selçuk, Gurukota reMhuri, Vashandi neVemagariro [More ...]
Population Directorates Open Kwevadzidzi Kupinda YKS musi May 18-19
Ministry of Interior yakatumira imwe denderedzwa ku81 Provincial Governorships maererano neyakavha. Izvo zvakataurwa mudenderedzwa kuti kubva pakatanga kubuda kwekoronavirus, matanho mazhinji akatorwa kurwisa chirwere ichi nekuitwa. Takatambirwa [More ...]
MuSeketa yakatumirwa neBazi rezveMukati kumatare, kubva panguva yekubuda kwegoridhe, kurudziro yeBazi rezvehutano neDare reSainzi, zvinoenderana nemirairo yeMutungamiriri Recep Tayyip Erdoğan; kubuda / kutapurirana kunokonzerwa nehutano hweveruzhinji uye ruzhinji [More ...]
Kocaeli Metropolitan Municipality, iyo yaifambisa basa rekufambisa nekupa Akçaray tram mutsetse wevagari, yakatanga basa rekuti vanofamba nenzira yepamberi vavakwe padivi peSekapark Tram. Metropolitan Municipality [More ...]
PresidentBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu vakaita ongororo paMecidiyeköy-Mahmutbey Metro Line's Nurtepe Station. Vachitaura kuti varonga kuisa mutsara muna Chivabvu 19, asi denda haribvumire izvi, İmamoğlu akati, "Vatorwa [More ...]
Izmir Metropolitan Municipality Tourism Hygiene Board yakaunganidzwa kwenguva yechipiri kuti itarise maitiro ayo anozobvumirwa mumahotera uye chikafu uye zvinwiwa zvivakwa mushure mekuzorora mune zve coronavirus matanho. Izmir ichiisa Kanzuru yeKanzuru mukurwisa kubuda kwe coronavirus [More ...]
Izmir Science Board Said 'Shopping Malls irege kuzarurwazve'
Izmir Metropolitan Municipality Science Board yakapa chirevo pamusoro pekuvhurwa kwezvinhu zvekutenga nemusi weMuvhuro, Chivabvu 11, sekutanga danho muchigadziro chechiitiko mukubuda kwekoronavirus. Komiti yeSainzi “Hutano hweveruzhinji haisati yatangwa [More ...]
Telegraph yeAtatürk Yekutanga Olimpiki Champion Yaşar Erkan
Muna 1936, yegumi neimwe yemitambo yazvino yeOlympic yakarongwa nemaGerman muBerlin. Mitambo yeOlympic Greco-Roman wrestling mitambo yave kuenderera mberi kuDebchland Halle Sports Hall kwemazuva mana. Yekutanga pamakumi matanhatu neshanu muna Nyamavhuvhu 9, 1936 [More ...]
FNSS Defense Systems Inc. Armored Amphibious Assault Vehicle inoshanda naGeneral Manager uye CEO Nail Kurt pane We Visionary chikuva chekushandisa mune yakawanda-chinangwa amphibious kurova chikepe TCG ANATOLIA - ZAHA [More ...]
Dhivha Yepamhepo neNational Electric trekta Factory iri paKusimudzirwa Stage
Minister Pakdemirli vakati nerudzi rutsva rwekoronavirus (Kovid-19), vanhu vazhinji vanoda kutora chikamu mubazi rezvekurima uye vakati, "Tiri kuvaka zvirongwa zvevachaita bhizinesi iri." Vechidiki vanofarira zvekurima [More ...]